प्रिमियममा एफपिओ जारी गर्दै बैंक — Arthatantra.com
Arthatantra.com > बैक > प्रिमियममा एफपिओ जारी गर्दै बैंक
प्रिमियममा एफपिओ जारी गर्दै बैंक
काठमाडौ। एनएमबी बैंकले सर्वसाधारण सेयरधनीको हिस्सा ४९ प्रतिशत पुर्याउन अर्को एफपिओ जारि गर्ने भएको छ। नेपाल धितोपत्र वोर्डले अनुमति दिए एनएमबीको तेस्रो एफपिओ हुने छ।
करिव ७र८ बर्षअघि पनि बैंकले सर्वसाधारणका लागि एफपिओ जारि गरेको थियो। चालु आर्थिक बर्षमै पनि बैंकले तत्कालीन क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंक मर्जहुँदा भित्रिएको डच साझेदार एफएमओका लागि एफपिओ जारि गरेको हो।
बैंकले चालु आर्थिक बर्षभित्रै एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँको एफपिओ जारि गर्न लागेको हो। एफपिओ प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित भइसकेको छ।
मर्जरका कारण बैंकमा सर्वसाधारणको स्वामित्व ३९.९९ प्रतिशतमा आएको छ। बैंकले यसलाई ४९ प्रतिशत पुर्याउन खोजेको हो। बैंकले १०० रुपैयाँ अंकित दरको सेयर मूल्यमा ४२२ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रति कित्ता ५२२ रुपैयाँमा ल्याउने छ।
धितोपत्र वोर्डको नीति अनुसार आजको दिनको मूल्य ५२२ रुपैयाँ हो, बैंक स्रोतले भन्यो, स्वीकृतिका लागि वोर्ड जाँदासम्म मूल्य केही तलमाथि हुन सक्छ। तर मोटामोटी मूल्य यही हो। बैंकले एक करोड १४ लाख कित्ता सेयर जारि गर्ने छ।
बैंकले प्रस्ताव गरेकै मूल्यमा सेयर जारि गरेमा एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजीमा जाने छ। पाँच अर्ब ९५ करोडमध्ये बाँकी रकम जगेडा कोषमा जाने छ, जुन आवश्यक पर्दा वोनस सेयर जारी गरेर चुक्ता पूँजीमा परिणत गर्न सकिन्छ।
एफएमओको एफपिओसमेत गरेर बैंकको चुक्ता पूँजी ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। सर्वसाधारणको एफपिओबाट एक अर्ब १४ करोड बढ्दा बैंकको चुक्ता पूँजी ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ। बैंकले नाफाबाटै वोनस सेयर दिएर पूँजी ८ अर्ब पूर्याउने छ।बिजमाण्डु डटकमबाट
२०७३ चैत्र २७ गते १४:३८ मा प्रकाशित
सुन किन्ने हो ? आज ५ सयले घट्यो
अब नेपालमा कहिल्यै लोडसेडिङ हुँदैन, किन ?
सानिमा लाइफले ल्यायो वार्षिक धनफिर्ता बिमा योजना
केएल मोबाइल हबमा मोबाइल एक्सचेन्ज मेला सुरु
नेप्से झरेर १५७५ मा आईपुग्यो,बजार राताम्य किन ?
७ प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना अध्ययन गर्न ६३ आवेदन